November 2017 - Ceelhuur Online
November 30, 2017 November 30, 2017 Cali Yare203
Kulan howleedka Golaha Amniga Gobolka Banaadir oo uu shir-guddoomiyey Gudoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Thaabit Cabdi Maxamed ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin arrimaha la xiriira amniga Gobolka, dhulalka iyo Go’aammada Maxkamaddaha. Golaha Aminga G/Benaadir wuxuu walaac ka muujiyay sida sharciga fulintiisa ay mar walba u hirgalin oo loo hareer […]
November 30, 2017 November 30, 2017 Cali Yare214
Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in bam gacmeed lagu tuuray ciidamo ka tirsan Puntland kuwaasoo marayay waddo mashquul badan oo ku taal bartamaha magaalada Boosaso. Bamkan ayaa geystey qasaaro iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dad gaaraya toban ruux oo badankood ahaa ciidamadii saarnaa gaariga bamka lagu weeraray la dhigey […]
Wasaaradda Maaliyadda DFS oo hirgalisay in Askari kasta Akoon gaar ah yeesho (Sawirro)
November 30, 2017 admin204
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa Maanta Daah furay Diiwaan-galinta Ciidamada Xooga Dalka oo markii ugu horeysay Taariikhda Soomaaliya Askari walbo Mushaarkiisa uu ku qaadan doono Akoonkiisa gaarka ah. Arintaan oo uu hormuud ka yahay Wasiir Beyleh ayaa ujeedkeedu waxa uu yahay in laga gudbo Nidaamka Lacagaha Kaashka ah gacanta […]
November 30, 2017 admin201
Waxaa maanta Xerada 54 aad Ee Garowe lagu qabtay Xaflad lagu wareejinayay ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta Puntland oo ku biiraya Ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed. Ciidankan oo tiro ahaan gaaraya 2,400 oo Askari, ayaa qayb ka ah ciidamo laga qorayay Maamulada xubnaha ka ahDawladda Federalka Dhexe, waana heshiis horey loo kala saxiixday oo ku saabsanaa […]
November 30, 2017 Cali Yare191
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kaga qayb galaya magaalada Abidjan ee dalka Ivory Coast shirka 5aad ee madasha iskaashiga waddamada Midowga Afrika iyo Midowga Yurub. Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa si heer sare ah ugu soo dhaweeyey Garoonka Diyaaradaha ee Félix Houphouët-Boigny ee Abidjan Madaxweyne Ku Xigeenka dalkaas Mudane Daniel Kablan, Wasiirka […]
November 30, 2017 Cali Yare193
Dowlada Maraykanka ayaa beenisay in dad rayid ah lagu diley howlgalo laga fuliyay beer ku dhow deegaanka Bariire ee gobolka Sh/hoose 25kii August ee sanadkan. War rasmi ah oo ay Milatariga Maraykanka soo saareen ayaa lagu sheegay in dadka howlgalkaa lagu diley ay ahaayeen “Kuwo hubeysan oo cadow ah”. Warbixin kooban oo ay soo saareen […]
November 30, 2017 Cali Yare272
Wararka ka imaanaya Dalka Koofu-Africa ayaa Sheegaya Koox Burcad ah oo hubaysani Dileen Ganacsade Soomaaliyeed hal ay mid kala dhaawaceen.Labada Nin ayaa la sheegay in ay ahaayeen walaalo waxaan lagu kala Magacaabaa Cumar Salaad Xaashi iyo Liibaan Salaad Xaashi. Ganacsade Cumar Salaad Xaashi ayaa u dhintay weerarka Kooxda Buracada ah Halka uu ku dhaamacmay Walaalkiis Liibaan […]
November 29, 2017 Cali Yare184
Hirshabeele waxey maanta yeelatay 20 wasiir, 20 wasiir ku xigeen iyo 17 wasiiru dowle taas oo ka dhigan iney lee yihiin 57 Wasiir, waa maamul goboleedkii u dambeeyay ee la hir galiyo Somalia. Malahan ila dhaqaale, ma shaqeeyaan kaabayaashii guud, dadkuna ma heystaan adeeg Bulsho, canshuur lama qaado, Dekadaha maamulkuna ma shaqeyaan, maamulkan wuxuu bil […]
November 29, 2017 Cali Yare219
Wararka ka imanaya magaalada Xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo 13-kii August isku soo dhiibay dowladda Federaalka Soomaaliya uu maanta gaaray degmada Xudur ee gobolka Bakool. Roobow oo ay wehlinayaa xubno uu kamid yahay wasiirkii hore ee difaaca xukuumadda Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed ayaa lagu soo dhoweeyay […]
November 29, 2017 Cali Yare212
Maamulka Gobolka Benaadir ayaa ku guuleestay in uu dib ugu soo celiyo Dhul uu lahaa allaha u Naxariistee Madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/laahi yuusuf Axmed, Caruurtiisa ayaa lagu wareejiyay dhulkaas oo ku yaala Degmada Wadajir ee Gobolka Benaadir oo in muddo ah laga hastay. Gudoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Thaabit Cabdi Maxamed […]